Csigakert Lux Apartment Gyula - I-Airbnb
Csigakert Lux Apartment Gyula
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHotel Gyula
Indlu yendlu, eyakhiwe njengesakhiwo esifana nenqaba kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo kwi-2016, kunye neendawo zokuhlala ze-2, ibekwe kufuphi neyona ndawo intle kakhulu eluhlaza yaseGyula (Csigakert). Indlu ye-31 m2 yabantu aba-5 inegumbi lokulala elibanzi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Izixhobo zamagumbi ethu anefenitshala entle ezanelisa zonke iimfuno: umoya, igumbi lokuhlambela elineshawa eyahlukileyo, indlu yangasese, isicoci sevacuum, ifriji, iketile, itoaster, isitovu sombane, imicrowave, isinki, iTV, into yokusika, iseti yokutya neeglasi, iterrace enefenitshala. , 2 izithuba yokupaka eyadini.
Ihotele i-Wellness Gyula **** ihotele ephezulu ibekwe ecaleni kwegadi yendlu, apho iindwendwe ze-Csigakert Apartment zingasebenzisa i-650 m2 yehotele enemigangatho emibini ye-Wellness Oasis kunye ne-300 m2 ye-Csigakert Playhouse ekhethekileyo kunye neenkqubo zabantwana ze-3. kwiminyaka. kwiminyaka 3 zokugcina abantwana.
Iinkonzo ze-Wellness Oasis: i-adventure pool, ichibi labantwana, i-whirlpool, i-sauna yase-Finnish, ikhabhathi ye-infrared, ikhabhathi yomphunga, i-plunge pool, ibha yevithamin.
Iinkonzo zeCsigakert Playhouse: ikona yesponji ene-ball sea, i-maze kunye ne-bouncy castle ene-slide ne-ball sea, i-MINIDISCO rhoqo ngeveki ngoMvulo, ngooLwezithathu nangeMigqibelo ukususela ngentsimbi yesi-6.30 malanga. UMomó, umaskandi wendlu yokudlala, utyelela abantwana rhoqo ngoLwesibini, ngoLwesine nangoMgqibelo ngo-10.00.
Indawo yokuhlala ithandeka kakhulu kwizinto ezininzi. Ifumaneka kwi-400 m ukusuka kwiziko kunye ne-20 m ukusuka kwiBath ye-Castle. Inqaba yaseGyula kunye neNqaba yaseAlmásy ikumgama weemitha ezingama-350.
Umbuki zindwendwe ngu- Hotel Gyula
Ifowuni: + 36 66 463-522
Sithanda ukwazisa iindwendwe zethu ezithandekayo ukuba zinokuthatha isitshixo kwindawo yokwamkela i-Wellness Hotel Gyula, esecaleni kwendlu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gyula